Ukulethwa Ngokushesha Okumaphakathi Kwama-Machining Factory | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Mayelana NATHI > Delivery
▶ Umugqa Wokupakisha Okhethekile
Efektri ye-PTJ, ukulethwa kwempahla eluhlaza kanye nokuhlelwa kwenqubo yokukhiqiza kuphethwe ngokusebenzisa i- ngokwezifiso ERP uhlelo lokulandela umsebenzi ukuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi kumakhasimende.
Imigqa ekhethekile yokupakisha ifika kumamitha ayi-10.
Okungenani, kunabasebenzi abangu-12 abapakisha ngesandla
Sisebenzisa okwenziwe ngezifiso ngoba yisoftware esetshenziswa kakhulu futhi ethembekile eyenzelwe ngqo abakhiqizi abangokwezifiso, izitolo zemisebenzi, nezitolo zobuchwepheshe obuphezulu. Yonke imininingwane yokulandela ngomsebenzi ingene ohlelweni lwethu ekuqaleni kwe-oda ngalinye lamakhasimende. Yonke inqubo iyalandelwa ngokulethwa ukuqinisekisa ukuthi izinsuku zokuzibophezela ziyahlangatshezwa.
▶ Ukulawulwa Kokusungula
Sine iminyaka engaphezu kweyishumi ngokubambisana nabaphakeli, futhi umphumela wokukhiqiza uphezulu. Izingxenye ze-CNC zemishini ngokuyisisekelo zikhona, ngaphandle kwezinye izingxenye zokunyathela.
Ukugcinwa kwempahla ejwayelekile namasampula nokubhaliswa kwezingxenye ze-CNC kuzobekwa emashalofini endlu yokugcina impahla.
Kodwa-ke, ukugcinwa kwamasampula neminye imikhiqizo ethunyelwe yikhasimende kuzobhaliswa futhi kusetshenziselwe ukulungiselela ikhasimende ukuvulwa okulandelayo kwe-oda.